Shaqaale ka howl-gelayey saldhig Meleteri oo si bareer ah maanta loogu toogtay Afghanistan – Radio Daljir
Shaqaale ka howl-gelayey saldhig Meleteri oo si bareer ah maanta loogu toogtay Afghanistan
Luulyo 18, 2013 4:05 b 0
Pad-Khwab, July 18- 2013 – Maanta oo khamiis ah waxaa kooxo hubaysan ay weerar ku dileen shaqaale muruq maal ah, kuwaasi oo ka shaqaynayey saldhig ka mid ah kuwa Maraykanka ee ku yaala Afghanistan.
BBC ayaa ?waxay shaacisay dhimashada 8-ruux oo dhamaantood ka tirsanaa shaqaalaha muruq maalka ah ee dalka Afghanistan, kuwaasi oo si bareer ah loo toogtay.
Weerarka oo dhacay saacadihii hore ee maanta oo khamiis ah ayaa laga fuliyey deegaanka Pad-khawab ee ku dhow xaruunta gobolka Logar ee dalka Afghanistan.
Shaqaalaha ayaa waxaa la istaajiyey Gaari Bas ah oo ?ay saarnaayeen, kadibna waa la soo dejiyey iyagoo dhamaantood la toogtay, waxaa la xaqiijiyey in ay ahaayeen dhalinyaro da?yar ah oo u dhexeeya 15 ilaa 25 sano jir.
Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi ka dhacay gobolka Logar ee dalka Afghanistan, waxaase loo malaynayaa in ay ka dambeeyeen kooxaha ka soo horjeeda howgalka NATO ee dalkaas.
Shaqaalaha la toogtay waxay ahaayeen dhamaantood dad muruq maal ah oo ka shaqeysta saldhig meleteri oo Maraykanku ku leeyahay gobolkaas.
Waxaa haatan lagu jiraa bisha Barakaysan ee Rammadaan, waxaana kooxda Taalibaan ee dalkaas ka dagaalanta ay sheegeen in ay sii wadi doonaan weerarada ay inta badan geystaan ee lala eegto meelaha lagu badan yahay iyo xaruumaha ciidamada.
War-bixin:- Tartan iyo Tacliin oo Daljir ka socda iyo Natiijooyinkii Tartamadii dugsiyada sare ee xalayto
Meleteriga Dowlada iyo Al-shabaab oo dagaal khasaare geystay ku dhexmaray deegaanka Ow-diinle